Ukuzikhethela kwezindebe zomthunzi ofanele akuyona umsebenzi olula. Futhi abesifazane besifazane kuphela baqonda ukuthi kubaluleke kangakanani lokhu. Ngemuva kwalokho, lipstick udonsela ukunakwa izindebe ezinhle futhi zenyama besifazane . Ngenhlanhla, izindebe zomlomo zesizukulwane esisha ziye zahamba phambili kwabaningi abandulele. Ukubunjwa kwabo kwamanje kukhanya kakhulu, ku-matte, kukhilimu, kukhanya (kodwa hhayi futhi), umbala ogcwele.
Isinyathelo 1. Khetha umbala
I-shades yembala ye-lipsticks yanamuhla ihluke kakhulu futhi ibheka izindebe zemvelo ngokwengeziwe futhi ziphila, ngoba zibonisa kangcono ukukhanya. Yingakho ukukhetha umbala owodwa akulula. Ikakhulukazi kusukela izakhi ezintsha ezibonakalayo zifanelekile cishe noma yikuphi umthunzi ebusweni. Kodwa-ke, imithetho ethile yokukhethwa kwe-lipstick isasebenza:
1. Uma ungathandi izinqumo ezinesibindi, kodwa ukhethe imibala yemvelo, khetha i-lipstick nje 1-2 ubeke umnyama noma ulula kunembala yakho yemvelo. Khona-ke ngokuqinisekile bayoba ngobuso bakho.
2. Njengomthetho, abesifazane abamhlophe bathola "amaqabunga" abandayo e-lipstick - kusuka ku-pink kuya kwiplamu, ngokusekelwe kumbala okwesibhakabhaka. Abesifazane abanamahlombe afudumele nabesifazane abaqothukile bazosondeza "shades" shades, esekelwe umbala ophuzi, isibonelo, ipayipi noma ensundu efudumele.
3. Umbala wezinwele zakho ubuye udaba: izinwele zakho zibe mnyama, imibala ecacile uzoya. Ngezinwele ezimhlophe, noma yikuphi ukukhishwa kwesikhumba kuzobonakala kubonakale.
4. Cabanga ngomthunzi wamazinyo akho. Uma umbala we-koqweqwe lwawo uphuzi kancane, imibala ebandayo ye-lipstick ingenza amazinyo akho abonakale ahlanzekile kancane. I-coral ne-orange shades ye-lipstick, ngokuphambene nalokho, izongandisa inkinga yakho kuphela. Ukufuna ukufihla ukungalingani kwamazinyo, shiya i-lipstick yemibala ekhanyayo kakhulu: ugxila kulokhu okushoyo. Kungcono ukunikeza okuthandayo kwi-lipstick ye-shades elula.
5. Uma ungathandi umthunzi wesikhumba sakho (oluhlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi kwamehlo, izihlathi ezibomvu noma eziphuzi, nezama-pink, njll.), Zama ukungakhethi umlomo ohambisana nombala noma umthunzi ofanayo. Kuzogcizelela kuphela ukwehluleka kwakho.
6. Abanikazi bezindebe ezincane kufanele banikeze izindebe ezinzima kakhulu futhi ezimnyama, njengoba ebonakalayo yenza izindebe zakhe zibe mncane kakhulu. Kodwa izindebe ezincane zibukeka njengezindebe eziqhakazile futhi ezinamabala, kanye nokukhanya. Abesifazane abagcwele ngokugcwele abahambanga nemithunzi ekhanyayo futhi engavamile, babonakala behlambalaza, naphezu kwazo zonke iziqinisekiso zamamagazini wezemfashini. Kodwa i-lipstick ye-tones yemvelo iyinhle kubo.
Isinyathelo 2. Hlola ezindebe
Kodwa lapha uthathe umbala oyidingayo, wenza izindebe zakho futhi ... awutholanga umphumela owawukulindele. Ngempela, njengoba umthetho, ezindebeni, i-lipstick ibukeka ihluke ngokuphelele kunombhobho. Iqiniso liwukuthi umthunzi wangempela we-lipstick ubonakala kuphela uma usetshenzisiwe.
Ungayithola kanjani ukuthi umthunzi wangempela we-lipstick? Yenza ithubhu yokuhlola ephepheni elimhlophe bese ubona ukuthi imbala engayibona ngaphandle kweyodwa. Kulula ukubona ephepheni elimhlophe, kunzima kakhulu ukuhlukanisa isikhumba. Ungabona umthunzi wemilayezo elandelayo:
I-Red / Pink : Yenza umbala oyinhloko we-lipstick efudumele, kodwa ngesikhathi esifanayo ubhekene nokujula. Ungakwazi futhi ukunikeza uboya obubomvu ubuso bakho bonke, ngakho qaphela!
Iphuzi / i-Orange : Yenza umbala oyinhloko we-lipstick efudumele futhi otholile. Kubonakala kuhle esikhumbeni samathoni afudumele, kodwa uma unesicu esibomvu, singenza ubuso bakho bube buhlaza noma buhlaza. Kubuye kube kuhle kakhulu ukukhetha ophuzi, hhayi o-orange, hue. Umthunzi omningi we-orange ungenza isikhumba sakho sibonakale sifunga futhi siphumelele.
Okuhlaza okwesibhakabhaka / oluhlaza okwesibhakabhaka : Lo mthunzi uyakwazi ukunikeza ukujula okunamandla ngokwengeziwe. Kubonakala kuhle esikhumbeni samathoni abandayo.
Isiliva / Grey : Inikeza izindebe ukuba zinciphise, ubumnene, ukujula - ukuthi yini manje ethandwa kakhulu ezindlebeni zomlomo. Ikhanyisa futhi ithambekele ithoni enkulu ye-lipstick, qinisekisa ukuthi ayinayo imfucumfucu emnyama kakhulu, kungenjalo ingabonisa imibuthano ngaphansi kwamehlo.
Ukukhanya okwesibhakabhaka : Lo mthunzi unamakhemikhali ezinkampani ezihamba phambili, futhi ngokuvamile uhambisana ne-yellow tint. Uzobukeka unamanje, kodwa kungase kubonakale ukuthi ubuso bakho abukho umbala. (Ukusikisela: yingakho izinkampani ezihamba phambili zezimonyozi zihlakulela ububanzi obukhulu kangaka!)
Isinyathelo 3. Izimfihlo zesicelo esifanele
Inselele enkulu ekusebenziseni i-lipstick ukuwugcina phakathi kwemingcele edingekayo isikhathi eside, ungawuvumeli ukuba usakaze futhi ungcolile amazinyo akho, izingubo, njll. Nakhu ukuthi ochwepheshe batusa:
1. Qinisekisa ukuthi ucacise imingcele . Ngaphambi kokusebenzisa i-lipstick, cacisa umjikelezo wangaphandle wezindebe nge-base tonal light. Le divayisi ngeke ivumele ukukhishwa kwesikhumba ukusabalalisa, futhi idale ukungafani okulula, lapho izindebe zizobonakala zigcwele khona. Khona-ke intambo ingagcizelelwa ipensela, kodwa kuphela emgqeni wemvelo wezindebe zakho noma embala we-lipstick, ngokungabi nakumnyama. Lokhu kuzokwenza esinye isithiyo ngokumelene nokusabalalisa.
2. Khohlwa ngomshini noma umfakisicelo . I-Lipstick, esetshenziswa ngokuqondile kusuka ku-tube, ihlala isikhathi eside, futhi umbala wayo ukhulu kakhulu.
3. Gcina kalula izindebe zakho ngezicubu . Lokhu kuzosusa uhla lweqhwa elikhulu ngokweqile, olwenyuka, ngoba akanaso isikhathi sokuvuza.
4. Vikela amazinyo akho . Ukuze uvimbele amazinyo ukuthi angabonakali nge-lipstick, i-TV kanye nezinkanyezi ze-movie zivame ukufakwa nge-petroleum jelly. Kodwa uma ufuna ukuphinda ukwamukelwa kwabo, ke-ke, cishe, ngeke ukhohliswe yinoma ubani, futhi uzobukeka njengomuntu onamazinyo afakwa nge-petroleum jelly. Esikhundleni salokho, kunezinye izindlela zokuvimbela i-lipstick ekushicileleni emazinyo. Okokuqala, ungabeki izindebe phambili uma usebenzisa i-lipstick, kuleso simo, indawo yangaphakathi yezindebe idayiwe, okuyinto ephazamisa amazinyo. Okwesibili, emva kokufaka isikhala somlomo, faka inkinobho yakho emlonyeni wakho, futhi ugibele kancane izindebe zakho, uyisuse kancane. Ngomunwe uhamba wonke umlomo ophuma emlonyeni wezindebe.
Isinyathelo 4. Qaphela izindebe zakho
Isikhumba emilonyeni sincane kakhulu kunesikhumba ebusweni bonke. Lokhu kusho ukuthi limile ngokushesha futhi likwazi ukubhekana nezimo zezulu ezimbi: iqhwa, ilanga, umoya. Kuvame ukucwilisa isikhumba sezindebe ngama-balms akhethekile, noma bonke abane-petroleum jelly noma amafutha amaminerali afanayo. I-Vaseline namaminerali amaminerali ahlala isikhathi eside esikhumbeni, evikela ubuso bawo, kanti amafutha omvelo asheshe afakwe. Ingqimba elula ye-balm ingasetshenziswa futhi ifakwe nge-lipstick.
Ebusuku, sebenzisa ukhilimu wakho ovamile ubusuku endaweni ezungeze izindebe, lapho imibimbi emihle ivela khona ubudala.
Ngesinye noma kabili ngesonto ngaphambi kokulala, kancane kancane bhala izinindebe nge microgranule ukuze ususe izinhlayiya ezifile, bese usebenzisa ukhilimu oluningi lokunyusa.
Zama ukukhohlisa izindebe zakho kancane: lokhu akuholeli nje kuphela ukuqhuma komlomo, kepha futhi nokomisa izindebe nokubunjwa kwamaphutha.
Iziphi izimonyo zokuthenga isikhumba esincane?
Ukukhathazeka kothando: umugqa wamafutha Daisy Blush nguMarc Jacobs
Shoes "Lunokhody" okumele ukhethe nokuthi yini ongayigqoka
Yiziphi izindlela ezingavunyelwe emzabalazweni wobuholi?
Amakhowe ngobisikhilimu omuncu
Ikhekhe le-Curd nge-cherries
Indlela yokunakekela isikhumba sakho ekhaya
Ikhalenda yezempilo yabesifazane ka-2014
U-Aerogril ungumsizi onokwethenjelwa ekhishini
Konke okubandakanya: iqoqo lokuhlobisa u-Estee Lauder Victoria Beckham 2016
Ingaphakathi lonyaka omusha ekamelweni labantwana
"U-Tyakin sibori" i-dessert yaseJapane
I-Horoscope for Woman Libra ngo-Ephreli 2017
Ukugcoba ngomhlaka ngoFebhuwari 14: imibono emisha yokuklama nemidwebo